B2B: Maitiro Ekugadzira Inoshanda YeSocial Media Lead Generation Funnel | Martech Zone
B2B: Maitiro Ekugadzira Inoshanda YeSocial Media Lead Generation Funnel
China, Kukadzi 17, 2022 China, Kukadzi 17, 2022 Ann Smarty
Social media inzira yakanaka yekuita kubudisa magwara uye kuziva kwemhando asi zvingave zvakanyanya kunetsa mukugadzira B2B inotungamira. Sei social media isingashande seB2B yekutengesa funnel uye sei kukunda dambudziko iroro? Ngatiedzei kuzviona!
Social Media Lead Generation Matambudziko
Pane zvikonzero zviviri zvikuru nei masocial media mapuratifomu achinetsa kushandura kuita nzira dzinogadzira inotungamira:
Kushambadzira kwesocial media kunovhiringidza -Kunyangwe wakananga sei yako social media strategy, social media kazhinji haisi iyo nzvimbo iyo vanhu vanoita bhizinesi. Ivo vari kuongorora yavo social media feed kuti vabate neshamwari, mhuri uye vekare vavanoshanda navo. Vanogona kutarisa kuvhiringidzwa kubva kumabasa avo uye kuona mavhidhiyo anonakidza kana memes. Yako masocial media link inokanganisa maitiro. Kunyangwe iwe ukanongedza izvo zvigadziriso zvakanyanya uye uchisvika kune vaunoda vateereri, kazhinji haisi nguva yakakodzera yetarisiro yako.
Nzendo dzekutenga dzakanyanya kuoma - Kana zvasvika kuB2B, vatengesi nevatungamiri vekutengesa vanofanira kutarisana nezvikamu zvekuita zvisarudzo, vanhu vanoverengeka vanogona kusarudza kana chigadzirwa chako chiri chinhu chavanoda kuisa mari. .), mamaneja (maneja wekushambadzira, maneja wekuvandudza chigadzirwa, maneja wetsigiro yemutengi, nezvimwewo) pamwe nemushandisi wekupedzisira (munhu anenge ari kumberi kwekupedzisira achishandisa chigadzirwa chako, semuongorori weSEO kana timu yekubatana ) Nekuda kweizvozvo, rwendo rwekutenga rwunogona kutora mavhiki nemwedzi uku chipo chako chichifamba kubva kudhipatimendi kuenda kune rimwe dhipatimendi. Iko kunenge kusingambofungidzirwe kutenga munzvimbo iyo inoshanda zvakanyanya mukushambadzira kwesocial media. Iwe unoda mamwe akawanda ekubata kuti uyeuchidze tarisiro yako yako uye chigadzirwa chako.
Maitiro ekugadzira maLead kubva kuSocial Media?
Zvakadaro, social media inogona kuramba ichishanda zvakanyanya kuburitsa zvinotungamira uye kutsigira mamwe ako ekutungamira chizvarwa kuedza. Heino maitiro.
1. Gadzirisa yako social media yekuteerera tsika
Kutariswa kwesocial media kwakakosha pakugadzira inoshanda yekutengesa funnel. Iwe unoda kukwanisa kuvepo kutora chikamu munhaurirano dzakakodzera uye kupindura kutaurwa kwesocial media. Zvichakubatsirawo kuti unzwisise nzira dzevakwikwidzi vako dzinotungamira chizvarwa pamwe nekuita zvirinani kune vateereri vako.
Awario inopa yakakwana yesocial media yekuteerera mhinduro yaunogona kushandisa kutarisa brand yako, mazita evakwikwidzi vako, chaunovavarira nhaurirano dzevateereri, nezvimwe. Nekushandisa Awario's boolean search feature unogona kutarisa chero chinhu. Pamusoro peizvozvo, Awario inopa inobatsira chizvarwa chinotungamira chinokubatsira kubata nhaurirano dzinogona kukonzera shanduko nyore nyore.
Pamusoro pekuteerera kwesocial media, funga kuteedzera akakosha social media profiles ebio uye profile pic shanduko: Izvi zvinokutendera kuti utore nguva yako yekubata zvirinani kusvika kana tarisiro yako ichisimudzirwa, kupemberera chiitiko chakakosha, kana kutengesa chimwe chinhu chakakosha, senge bhuku idzva kana chiitiko.
Kuona inzira yakanaka yekumisikidza iyi mhando yekutarisa ichikutendera iwe kuti uzive nezve shanduko pairi Instagram, Facebook, kana kunyange mapeji akachengetedzwa-password:
2. Gadzira peji rekugara pasocial media (kana saiti)
Pane zvakawanda zvekutaura nezve peji rekumhara iro rinofanirwa kushandura masocial media lurkers kuita ma lead, uye hapana kana rimwe remazano pano richave rakanakira. Iwe uchafanirwa kuyedza uye A / B bvunzo yakawanda. Pane misimboti yakakosha:
Izvo zvinofanirwa, sezviri pachena, kuve-inoshamwaridzana sezvo vanhu vazhinji vachiwana social media kubva kune nharembozha
Inofanira kutakura nokukurumidza, uye ushumire chikamu chakakosha chekutanga kuti irege kurasikirwa nevashandisi vesocial media vasingashiviriri
Inofanira kunge iine humbowo hwakajeka hwemagariro, kunyanya kubva kune vanonyatso kuzivikanwa kufurira. Reviews zvakakosha zvakanyanya pakushandura social media traffic
Chekupedzisira, inofanirwa kubata vashanyi vako ipapo, ichibvisa chero matanho ekuwedzera.
Zvakanaka, iwe unoda kuti vashanyi vepeji yako vaite chiito pakarepo.
Kukoka vashanyi vepeji yako kuti vasarudze nguva yenguva yedemo yemahara ipfungwa huru nekuti iyo inobvisa huwandu hwekudzoka uye mberi maemail uye inopfupisa yekutengesa funnel. Appointfix iapplication inobatsira inogonesa tarisiro yako kuronga kufona uye kuiwedzera kukarenda yavo nekudzvanya kamwe chete kwegonzo.
Imwe pfungwa ndeyekuti wedzera live chat sarudzo iyo inzira yakanaka yekuvabata nayo mukutengesa kwekutengesa pakarepo.
Mune zvimwe zviitiko, kupa chimwe chinhu mahara ipapo ndiyo chete nzira yekubatanidza yako social media traffic. Haisi iyo pfungwa yakaipa kuvaita kuti vanyore kune yemahara webinar. Pane yakakura siyana yesocial-media-hushamwari webinar platforms kukubvumira kuti urarame kutenderera kune social media.
Kune mamwe mapaipi mapaipi, zvine musoro kumisa saiti yakaparadzana iyo ichave yakaparadzana kubva kune yako huru brand. Semuenzaniso, unogona kugadzira yakanangwa niche newsletter kana kuseta niche foramu uye woita iyo nhanho yekutanga mupombi yako.
Muchiitiko ichi, kugadzira webhusaiti yakaparadzana kunoita pfungwa yakakwana. Hapana chikonzero chekubhadhara toni yezita rezita, iwe unogona kushandisa Namify kukurumidza kuwana isingadhuri domain iyo ichava nyore kuisa chiratidzo.
3. Ita shuwa kuti zvigadziriso zvako (kana ads) zviri kuita zvechokwadi
Zviripachena, hapana imwe nzira yekugadzira inoshanda yemagariro media zvemukati.
Asi heano mamwe mazano ekuti iwe uedze nawo:
Shandisa yakawanda yemifananidzo nemavhidhiyo: Izvi zvichabatsirawo bhizinesi rako nekuonekwa kwako kwehupenyu kuburikidza nemasanji mumufananidzo uye vhidhiyo carousels
Gadzira sarudzo dzekuzvarwa uye wozoshambadza zvawawana mune yekutevera post
Tag vapesvedzera vaunotaura mune zvako zvirimo kuti uwane rubatsiro mukuzvisimudzira
Bvunza mibvunzo yakawanda
Chinyorwa Optimizer inzira yakanaka yekuwana mibvunzo inonakidza yekubvunza pasocial media uye kuita vazhinji vevateereri vako:
Heino zvakare gwara guru rekugadzira a social media content strategy.
4. Nguva yekuvandudza kwako kana kushambadza zvakanaka
Nguva ndizvo zvese mukushambadzira midhiya nekuti zvinokutendera kuti uwedzere iyo yekuvhiringidza chiitiko chatakambokurukura.
Mimwe mienzaniso yenguva yakanaka inosanganisira:
Chiitiko chiri kuuya niche icho munhu wese ari kutaura nezvazvo
Tsika kana shanduko yehupfumi yaita kuti chigadzirwa chako chinyanyo batsira (funga nezveZoom inoshandira kure kure kushambadzira panguva yeCovid kukiya)
Mwaka (semumwaka wemutero unouya), nezvimwe.
Google Maitiro inzira yakanaka yekufungidzira mafambiro emwaka. Inogona zvakare kuganhurwa kune imwe nzvimbo:
5. Nyora izvo zvinotungamira zvakanaka
Kurongeka kwakakosha kana zvasvika pakutungamira chizvarwa: Iwe unofanirwa kunyatsoziva wawakatoonana naye, izvo zvekubata zvave kusvika parizvino, uye kuti imwe neimwe DMU (yekuita sarudzo) inoita sei.
Apa ndipo panouya yakanaka CRM mhinduro.
Heino kuenzanisa kwakasimba kwe makuru eCRM mapuratifomu kuti iwe usarudze kubva. Tsvaga mhinduro yesoftware inopa yakasimba yekutengesa pombi manejimendi chimiro uye inogadzira yakadzama inotungamira profiles.
6. Tsvaka rubatsiro kubva kune vanofurira
Influencer marketing ndeyekuwedzera kukuru kune social-media-driven lead generation nekuti vanhu vanovimba nevanhu. Kukwira mashoma niche influencers kuchakubatsira iwe kugadzira kumwe kuvimba. Izvo zvakare zvichakubatsira iwe kuwana mamwe akakosha wongororo uye zvipupuriro zvekushandisa pane yako social media yekumhara peji.
Pane gwara rakadzama rekuti ungaita sei kuhwina social media influencers pasina kutsigirwa.
Awario inopa ine simba inopesvedzera kushambadzira chishandiso chinokutendera iwe kuti uone chaiwo madiki-vanozivikanwa mu niche yako uye yakanakisa nzira yekusvika kwavari:
7. Batanidza timu yako yese mukuita
Kushambadzira kwesocial media kunosanganisira vanhu vazhinji kupfuura timu yako yekutengesa chete. Iwe unofanirwa kuve nemamaneja enhau dzemagariro pabhodhi nekuedza kwako nekuti ndivo vanobatanidzwa mukuita uye iwe unofanirwa kugara uchigamuchira mhinduro kubva kuchikwata chako chekutsigira vatengi nekuti ivo vari pamberi pekudyidzana nevatengi vako vazvino.
Kunyangwe timu yako yekuvandudza chigadzirwa inofanirwa kuve nechekuita nekuti social media inzira huru yekuburitsa chaiyo-nguva mhinduro pazvishandiso zvako.
Saka kuchengeta kambani yako yese ichibatanidzwa mukuita kunozobatsira munhu wese uye kukubatsira iwe kuwana zvakatowanda zvinobatika mhedzisiro kubva mukuedza kwako. Kana usina chokwadi kuti ungaita sei izvozvo, tora izvi Yakabatana Communications bvunzo kuziva nzira yekumisa nzira.
8. Chikamu uye tengesa yako yemagariro media ads
Chekupedzisira, midhiya yenhau ndeyekuwedzera kune yako yese inotungamira chizvarwa kuedza nekuti iwe unogona zvakare kunanga vashanyi vesaiti yako zvichienderana nekubatana kwavo kwekare nesaiti.
Panguva ino ese makuru enhau enhau mapuratifomu anopa remarketing chimiro:
Facebook (uye Instagram): Unogona kudzorera kushambadzira kwako kune vanhu vakashanyira saiti yako, vakatendeuka, vakasiya ngoro dzekutenga, nezvimwe.
Twitter: Unogona kushambadzira kune vashandisi vakaona kana kuita newe pa Twitter
LinkedIn: Unogona kudzorera kushambadzira kwako newebhusaiti, mavhidhiyo ads, Lead Gen Mafomu kana nekukurumidza LinkedIn Chiitiko.
Kushambadzira kwesocial media kune rimwe dambudziko rakakura rekutarisana naro: Iwe unofanirwa kugara uripo kuti uone mibairo. Iyo nguva yaunomira, nhamba dzekutungamira dzinotanga kutanha. Saka hapana kuyera pano: inzira inoenderera.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, uchishandisa maturusi nematanho ari pamusoro iwe uchakwanisa kuseta inoshanda inotungamira chizvarwa zano kuti uite zvakanyanya yesocial media traffic. Rombo rakanaka!
kuburitsa: Martech Zone iri kushandisa yavo affiliate links kune zvimwe zvigadzirwa mune ino chinyorwa.
Tags: awariob2bb2b vatengi rwendob2b kutungamira chizvarwaCRMcrm platformsgoogle zvimirokushambadzira kushambadzirainfluencer rutsigiroInfluencerssarudzo dzekuzvarwamusarudzozvikamukushambadzira munharaundakutarisana nevanhuevanhu vezvenhausocial media ad segmentationsocial media content strategysocial media kumhara pejipasocial media inotungamira chizvarwapasocial media kuteererasocial media segmentationsponsorshipstag influencerstext optimizerTwitterkubatana kukurukuriranavhidhiyo yecarousel adskuonaYouTube
Ann Smarty ndiye mucherechedzo uye maneja wenharaunda paInternet Marketing Ninjas uye muvambi we Viral Content Bee. Ann's search engine optimization basa rakatanga muna 2010. Ndiye aimbove mupepeti-mukuru weSearch Engine Journal uye anobatsira kutsvaga kwakatanhamara uye mabloggi emagariro, kusanganisira Diki Business Trends uye Mashable.
Mazambiringa mukati, Champagne Kunze: Maitiro AI ari Kushandura Iyo Kutengesa Funnel
Iwo 8 Akanakisa (Mahara) Keyword Tsvagiridzo Zvishandiso zve2022